Global Voices teny Malagasy » Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Janoary 2013 9:37 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Pakistana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Olona 82 no namoy ny ainy  nandritra ny daroka baomba namely faritra iray be mponina indrindra ahitana foko Miozolomana Shiita Hazara , tao an-tanàna Atsimo-Andrefan'i Quetta, tamin'ny 10 Janoary 2013.
Namoy ny ainy nandritra ny fanafihana faharoa i Irfan Khudi Ali,  mpikatroka mazala momba ny zon'olombelona izay tsy sasatry ny nanasongadina ny fanenjehana ny Shiita Hazara ao Pakistan
Tao amin'ny Twitter, voalaza fa tafatsoaka tamin'ny daroka baomba voalohany tao Quetta  i Ali: 
Namoy ny ainy i Ali tamin'ny fipoahan'ny baomba faharoa androany alina. Mandria am-piadanana @khudiali  RT @khudiali  #Quetta , andeha hody izy rehefa tafala tamin'ny daroka baomba voalohany nahafatesana olona 11
Niteraka fanomezam-boninahitra ny tolona nataony ny famonoana azy ary nanavao [indray] ny fihetsiketsehana manohitra ny famonoana ireo Shiita ao Pakistana. Tatitra momba ny zava-nitranga tao an-toerana izay mikasika ny fandosiran'ireo Hazara ny fanenjehana azy ireo ny sioka farany nalefan'i Ali  :
@khudiali Fianakaviana #Hazara #Machh ,Khuzdir tsy naharitra noho ny vono olona miseho & nifindra toerana. Andro mampalahelo ho an'ny fahasamihafana ao #Balochistan .
Nanomboka tamin'ny taona 2001, ireo Miozolomana Shiita Hazara ao Quetta foana no kinendrin'ireo vondrona milisy . Vitsy an'isa eo anivon'ny vitsy an'isa, ny famonoana ireo Shiita Hazara  no anisan'ireo tranga tsy misy mitantara mihitsy amin'ireo tranganà herisetra ao Pakistan
Nandrakitra ny famonoana ireo Shiita Hazara ao Pakistana ny Hazara.net , anisan'izany ny isan'ireo fanafihana sy ny isan'ireo olona namoy ny ainy hatramin'izao. Araka ny tarehimarika voalazan'ny habaka, Shiita Hazara 1100 no efa namoy ny ainy tao Pakistan nanomboka ny taona 1999.
@zainabimam : Tsara, Faisal Qureshi (mpilalao) tamin'ny seho maraina amin'ny antsipirihany mikasika ny fahitan'ny Shiita ny finoana. Sahisahy tokoa izy. Fisaorana avy aty amin'ny #Shia . #Pakistan 
@adyadeel: Tokony hifarana ny #ShiaGenocide  (fandripahana ny Shiita), tokony handray fepetra azo tsapain-tanana ny governemanta mba hanehoany fa te-hanavotra marina ny fiainan'ireo Shiita tsy manan-tsiny izy
Tsy vao voalohany amin'ny tranga tahaka izao ny andron'ny rà mandriaka ao Quetta, araka ny filazan'i Omar, ary mety tsy ho farany ihany koa. Nahatezitra ny maro ny tsy firaharahiana, indrindra hatramin'ny nanakanana ny fikambanana Sonita mahery fihetsika Lashkar-e-Jhangvi  izay nanao ny fanafihana ka mbola tsy tratra hatramin'izao.
@sehartariq  : Nahoana isika no mahatsiaro fiombonam-pò miaraka amin'ny Miozolomana ao Gaza fa tsy miaraka amin'ny Miozolomana ao #Pakistan  izay iray tantara & iray tanindrazana aminay #shiagenocide 
@zzzAsad  : Ireo mpivahiny Shiita ao anaty fitatera-bahoaka matetika no tena kendren'ireo mpivavaka mahery fihetsika #LeJ  #ShiaGenocide 
@FahidJaved : Ianareo mpivaro-kena mpandatsa-drà #LeJ , vonoy aho #WeAreAllHazara . Hazara avokoa ny Pakistaney rehetra, izahay tsirairay avy. Firy no hovonoinareo? Firy ny bala anananareo?
@Naseer_Kakar  : Vaovao farany tao #Quetta : nafindra any amin'ny hopitaly miaramila avokoa ireo niharam-boina rehetra satria niharan'ny fandrahonan'ny #LeJ  tao amin'ny Hopitalim-bahoaka ireo mpitsabo.#Balochistan  #blasts 
@AhmadShuja  : Mandria am-piadanana @khudiali . Nalatsak'izy ireo ny ainao, saingy mitoetra ny herim-ponao sy ny aingam-panahinao. #LeJ  #Quetta 
@ZakirChangezi  : Nilaza momba an'i #KhudiAli  “Maty ny vahoakako Shiita. Raha maty aho, te ho faty noho ny ezaka hanampy azy ireo”. #RIPKhudiAli 
Nandà tsy handevina ireo havany maty ny fianakaviana ary nanambara fa hanohy hanao sit-in izy ireo raha tsy mandray andraikitra haingana manoloana ny vono-olona ny tafika . Mampiseho ireo Hazara an'arivony mipetraka anaty orana miaraka amin'ireo vatana mangatsiaka lavo nandritra ny daroka baomba tao Quetta ity sary narakitra  tao amin'ny Twitter ity.
@ammar_faheem  : Nikarakara sit-in tao amin'ny lalàna Almadar ireo mpanao fihetsiketsehana Shiita miaraka amin'ireo nofo mangatsiakan'ny martiora tamin'ny daroka baomba omaly #ShiaGenocide 
@AdnanSarparrah  : Mitohy ny Sit-in ataon'ireo fiarahamonina Shiita saingy tsy hamaha olana ny fanankinana an'i #Quetta  amin'ny tafika, efa voafehin'ny tafika (FC) sahady tsinona i Quetta
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/14/44491/
 Olona 82 no namoy ny ainy: http://dawn.com/2013/01/10/four-explosions-in-quetta-10-people-injured/
 Miozolomana Shiita Hazara: http://en.wikipedia.org/wiki/Hazara_people
 daroka baomba voalohany tao Quetta: https://twitter.com/khudiali/status/289335103149207553
 nisioka hoe:: https://twitter.com/Maria_Memon/status/289453142507155458
 sioka farany nalefan'i Ali: https://twitter.com/khudiali/status/289346695521779713
 kinendrin'ireo vondrona milisy: http://dawn.com/2013/01/11/timeline-hazara-killings-in-balochistan/
 famonoana ireo Shiita Hazara: http://dawn.com/i-am-hazara/
 @adyadeel: : https://twitter.com/adyadeel/status/289813363473653760
 tao amin'ny bilaoginy:: http://peacecycle.wordpress.com/2013/01/11/direly-quetta-needs-more-khudis/
 mandray andraikitra haingana manoloana ny vono-olona ny tafika: http://dawn.com/2013/01/11/shia-leaders-question-army-chief-over-quetta-carnage/
 sary narakitra: http://twitpic.com/buc5n1
 ato kabariny manana angovo.: http://blog.ted.com/2013/01/11/tedx-speaker-killed-in-bombing/#more-67276